To: किन माउरिन्होले प्रिमियर लिगभन्दा युरोपा लिगलाई महत्व दिए?
लन्डन, बैशाख २८ (एजेन्सी) - इङ्लिस प्रिमियर लिगको शीर्ष ४ स्थान बनाउन संघर्षरत म्यानचेस्टर युनाइटेडले युरोपा लिगलाई दिएको महत्वलाई प्रशिक्षक जासे माउरिन्होले सामान्य कुरा बताएका छन्। युनाइटेडले युरोपा लिगको सेमिफाइनलअन्तर्गत पहिलो लेगको ‘अवे’ खेलमा सेल्टा भिगोविरुद्ध १–० को अग्रता बनाइसकेको छ। आज राती १२ बजेर ४५ मिनेटमा युनाइटेडले घरेलु ओल्ड ट्राफोडमा दोस्रो लेग खेल्दैछ। पहिलो लेगमा अग्रता बनाएका कारण आज इङ्लिस क्लबको फाइनल प्रवेश गर्ने सम्भावना बलियो छ।
लन्डन, बैशाख २८ (एजेन्सी) - आर्सनलले प्रिमियर लिगमा चौथो स्थानको सम्भावनालाई जिवित राखेको छ। बुधबार राती साउथ हाम्पटनविरुद्ध दोस्रो हाफमा एलेक्सिस साञ्चेज र ओलिभर गिरुडको गोलका कारण आर्सनल ३५ खेलमा ६६ अंकका साथ पाँचौं स्थानमा उक्लिएको छ।
एजेन्सी, वैशाख २८ - यस्तैमा एक परेका छन् भारतीय क्रिकेटका भगवान् मानिने सचिन तेन्दुलकरका छोरा अर्जुन। उनले बिबरको कन्सर्ट हेर्न जान दुःख नै गर्नपर्यो। दुवै हातले वैसाखी टेक्दै उनी बिबरको कन्सर्ट हेर्न पुगेका थिए। Comments
काठमाडौं, बैशाख २८ (सेतोपाटी) - डिफेन्डिङ च्याम्पियन रियल म्याड्रिड १५ औं पल्ट च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलअन्तर्गत दोस्रो लेगको खेल रियल म्याड्रिडले २–१ गोलले गुमाए पनि समग्रमा ४–२ को नतिजा निकाल्दै लगातार दोस्रो वर्ष फाइनल प्रवेश गरेको हो।
म्याड्रिड, बैशाख २८ (एजेन्सी) - यो गोलपछि एट्लेटिकोले फाइनल प्रवेशका लागि रियलविरुद्ध थप ३ गोल गर्नु पर्ने भएको छ। एट्लेटिकोले १६ मिनेट भित्र दुई गोल गर्दै तहल्का पिटेको थियो। च्याम्पियन्स लिगअन्तर्गत सेमिफाइनलको पहिलो लेगको खेल एट्लेटिकोले ३–०ले गुमाइसकेको छ। दोस्रो लेगको पहिलो हाफको खेल समाप्त हुँदासम्म रियलले समग्रमा ४–२ को अग्रता बनाएको छ। Comments
म्याड्रिड, बैशाख २८ (एजेन्सी) - कोकेको कर्नरमा ११ मिनेटमा नाभासको अगाडिबाट साउल निगुइजले हेडिङ गोल गरेका थिए। दोस्रो गोल १६ मिनेटमा पेनाल्टीबाट आन्टोन ग्रिजमनले गरे। भार्नेले डिबक्स भित्र फर्नान्डो टोरेसलाई लडाएपछि घरेलु टोलीले पेनाल्टीको अवसर पाएको थियो। Comments
कानपुर, बैशाख २७ (एजेन्सी) - रवीन्द्र जडेजाले मार्लोन सामुअल्स (१) र कोरी एन्डर्सन (६) लाई १० र ११ ओभरभित्र सिधा थ्रोबाट आउट गरेपछि संकटमा देखिएको दिल्लीलाई एक्लै एैयरले उकासे। तर, उनी पनि १९ ओभरको दोस्रो बलमा बासिल थम्पीको बलमा बोल्ड भएपछि खेल गुजरातको पक्षमा ढल्किएको थियो। तर, अमित मिश्राले २ बलमा लगातार २ चौका प्रहार गर्दै ४ बलमा आवश्यक ७ रनलाई उनले २ बल बाँकी रहँदै पुरा गरे।
काठमाडौं बैशाख २७ (सेतोपाटी) - सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा भुटानको थिम्पुमा आयोजना भएको एसियाली शारीरिक सुगठनको पुरुष ७५ केजी तौलसमूहमा महेश्वरले स्वर्ण जितेका थिए। एसियाली शारीरिक सुगठनमा स्वर्ण जित्ने महेश्वर एक्लो नेपाली खेलाडी हुन्।
कानपुर, बैशाख २७ (एजेन्सी) - ५६ रनमा ३ महत्वपूर्ण विकेट गुमाएको गुजरातले दिल्लीविरुद्ध हाल भइरहेको खेलमा दीनेश कार्तिक र आरोन फिन्चको चौथो विकेटका लागि भएको ९२ रनको साझेदारीका कारण गाह्रो लाग्ने योगफल तयार पारेको छ। गुजरातले ५ विकेटको क्षतिमा १ सय ९५ रन बनायो। Comments
नयाँ दिल्ली, बैशाख २७ (एजेन्सी) - भारतका बिस्फोटक ब्याट्सम्यान युवराज सिंहले आइसिसी च्याम्पियन्स ट्रफीअन्तर्गत पाकिस्तानविरुद्ध पहिलो खेलमा उत्रिँएपछि अनौठौं कीर्तिमान बनाउने छन्। Comments
मुम्बई, बैशाख २७ (एजेन्सी) - भारतीय क्रिकेटमा पूर्व स्टार ब्याट्सम्यान जतिबेला ब्याटिङ गर्न मैदानमा उत्रिन्थे, त्यतिबेला दर्शकदीर्घाबाट एउटै आवाज आउने गर्दथ्यो, ‘सचिन...सचिन।’ के तपाईंहरुलाई थाहा छ, यो लयलाई पहिलो पल्ट उच्चारण गर्ने व्यक्ति को हुन्?
लन्डन, बैशाख २७ (एजेन्सी) - पाउल पोग्बाको विश्व कीर्तिमानी अनुबन्धित रकम फिफाको जाँचको विषय बन्न पुगेको छ। पोग्बा गत वर्ष इटालियन क्लब युभेन्ट्सबाट कीर्तिमानी रकममा इङ्लिस प्रिमियर लिग क्लब म्यानचेस्टर युनाइटेड प्रवेश गरेका थिए।
क्याम्प नोउ, बैशाख २७ (एजेन्सी) - ब्राजिलका स्टार स्ट्राइकर नेइमारले अर्जेन्टिनी स्ट्राइकर लिओनल मेसीको अनुबन्ध सम्झौताको विवाद सल्टाउन बार्सिलोना क्लबसँग आग्रह गरेका छन्। मेसीले यो सिजन क्याम्प नोउका लागि ५१ गेल गरिसकेका छन्। र गत साता उनका लागि क्लबले राखेको वार्षिक ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव मेसीले अस्वीकार गरेका थिए।
दुबई, बैशाख २७ (एएफपी) - विश्व चर्चित अर्जेन्टिनी प्लेमेकर डिएगो म्याराडोना पुनः प्रशिक्षकको भूमिकामा देखा पर्ने भएका छन्। उनलाई युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) को दोस्रो श्रेणी क्लब अल फुजाइराहले प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। ५६ वर्षीय म्याराडोनालाई सन् २०१२ मा दुबईको अल–वासल क्लबले प्रशिक्षक पदबाट बर्खास्त गरेदेखि उनी फुटबलको व्यवस्थापनबाट बाहिर थिए। क्लबले ट्विटरमार्फत आफ्नो विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्ने क्रममा भनेको छ, ‘आधिकारीक रुपमा म्याराडोना फुजाइराहको प्रशिक्षक बनेका छन्।’
म्याड्रिड, बैशाख २७ (रोयटर्स) - यस्तो अवस्थामा खेलमा पुनः फर्किन आज एट्लेटिकोले आफ्नो रंगशाला भिन्सेन्ट काल्डेरोनमा कम्तिमा गोल नखाई ३ गोल फर्काउनु पर्ने बाध्यता छ। डिएगो सिमोनीको प्रशिक्षणमा रहेको एट्लेटिकोले गत वर्ष फाइनलमा निर्धारित समयको खेल १–१ गोलको बराबरीमा राखेको थियो। अन्त्यमा खेल पेनाल्टीबाट निस्कर्षमा निस्किएको थियो।
काठमाडौँ, वैशाख २७ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ५० औँ एसियन बडी बिल्डिङ एन्ड स्पोर्ट च्याम्पियनसिपका स्वर्ण पदक विजेता महेश्वर महर्जनलाई सम्मान गरेका छन्। अखिल नेपाल खेलकुद सङ्घले आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महर्जनलाई सम्मान गर्दै प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले खेलकुद विकासका लागि सरकारले सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। Comments
काठमाडौं, बैशाख २७ (सेतोपाटी) - इटालियन क्लब युभेन्ट्स ३ वर्षपछि पुनः च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बुधबार बिहान टुरिनमा भएको सेमिफाइनलअन्तर्गत दोस्रो लेगको खेलमा भ्रमणकारी मोनाको क्लबलाई २–१ गोलले पराजित गर्ने क्रममा सेमिफाइनलमा समग्रमा ४–१ गोलको नतिजा निकाल्दै युभेन्ट्स फाइनल प्रवेश गरेको हो। Comments
टुरिन, बैशाख २७ (एजेन्सी) - इटालीका भेट्रान गोलकिपर जियानलुइगी बुफोनले च्याम्पियन्स लिगमा ६ सय ९० मिनेट पछि पहिलो गोल खाएका छन्। युभेन्ट्सका विश्व चर्चित गोलकिपर बुफोनले यसपालिको च्याम्पियन्स लिगमा अघिल्लो ७ खेलसम्म गोल खाएका थिएनन्। Comments
कोलकाताले हातैमा आएको खेल गुमायो, पञ्जावलाई चिट्ठा
मोहाली, बैशाख २६ (एजेन्सी) - कोलकाताको हारमा क्रिस लिनको रनआउट र राहुल तेवातियाको बलिङ महत्वपूर्ण बन्न पुग्यो। ३ छक्का र ८ चौकाको सहयोगले ५२ बलमा ८४ रन बनाएका लिन १७ दशमलव २ ओभरमा रन आउट बन्न पुग्नु नै कोलकाताका लागि दूर्भाग्य बन्न पुग्यो। Comments
कोलकातालाई १ सय ६८ रनको लक्ष्य
मोहाली, बैशाख २६ (एजेन्सी) - कोलकाताले टस जितेर पहिलो ब्याटिङको निम्तो दिएको पञ्जावले ६ विकेटको क्षतिमा १ सय ६७ रन बनायो। कप्तान ग्लेन म्याक्सवेल र रिद्धिमान शाहले चौथो विकेटका लागि बनाएको ७१ रनको साझेदारीका कारण पञ्जावले सम्मानजनक योगफल तयार पारेको हो। म्याक्सवेलले ४ छक्का र १ चौकाको सहयोगले २५ बलमा ४४ रन बनाए। शाहले ३८ रन बनाएका थिए। Comments
मेसीको 'जर्सी कलेक्सन'मा रोनाल्डो परेनन्
क्याम्प नोउ, बैशाख २६ (एजेन्सी) - विश्व चर्चित अर्जेन्टिनी स्ट्राइकर लिओनल मेसीको जर्सी कलेक्सन गर्ने समर्थकहरु विश्वभरीमै छन्। तर, ती समर्थकलाई आफ्नो आर्दश मेसी विश्वका अन्य चर्चित स्टारको जर्सी कलेक्सन गर्ने शौख राख्छन् भन्ने थाहा नहुन सक्छ।
ऋषभ पन्त भारतीय टिममा नअटाउदा छनोट समितिमाथि प्रश्न
नयाँ दिल्ली, बैशाख २६ (एजेन्सी) - पन्तलाई भारतीय क्रिकेटको भविष्यका रुपमा हेरिएको थियो। र, पछिल्लो समय धोनीको खराब फर्मका कारण पन्तले उनको स्थान लिने भविष्यवाणी गरिएको थियो। Comments
चेल्सी प्रिमियर लिग जित्न ३ अंकले पछाडि, मिडल्सब्रोग रेलिगेशनमा
स्टामफोर्ड ब्रिज, बैशाख २६ (एजेन्सी) - चेल्सीले ३५ खेलमा ८४ अंक जोडिसकेको छ। अब उसले ३ खेल खेल्न बाँकी छ। चेल्सीलाई उपाधिका लागि एक खेल पर्याप्त हुनेछ। अंक तालिकामा दोस्रो स्थानमा रहेको टोटेनहाम ७ अंकले चेल्सीभन्दा पछाडि छ। टोटेनहामको ३५ खेलमा ७७ अंक छ।
नेपाल पहिलो दक्षिण एसियाली योगामा दोश्रो
काठमाडौं बैशाख २५ (सेतोपाटी) - प्रथम दक्षिण एसियाली योगा च्याम्पियनसिपमा नेपाल दोश्रो भएको छ। नेपाल कूल २६ अंकसहित उपविजेता बनेको हो। पहिलो भएको भारतले ५९ अंक बटुल्यो भने तेश्रो स्थानमा चित्त बुझाएको बंगलादेशले ५ अंक प्राप्त गर्यो।
पहिलो खेलमा मुम्बईबाट ४ विकेटले भोगेको हारको बदला लियो हैदराबादले
हैदराबाद, बैशाख २५ (एजेन्सी) - हैदराबादको जितमा आज उनीहरुको बलर मात्र होइन, शिखर धवन पनि नायक सावित भए। कप्तान डेभिड वार्नर ६ रनमा आउट भएको अवस्थामा धवनले ४६ बलमा २ छक्का र ४ चौकाको सहयोगले अविजित ६२ रन बनाए। उनी सुरुदेखि अन्त्यसम्म आउट भएनन्। हैदराबादले १० बल खेल्नुअघि जित सम्भव पारेको थियो। जितसँगै हैदराबाद चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। प िहलाे खेलमा मुम्बइले ८ बल खेल्न बाँकी रहँदा हैदराबादलाइ परा िजत गरेकाे िथयाे। Comments
दुई अफगानी बलरको प्रभावपछि मुम्बई १ सय ३८ रनमा रोकियो
मुम्बई, बैशाख २५ (एजेन्सी) - दशौं आइपिएलको प्लेअफ नजिक रहेको सनराइजर्स हैदराबादले प्लेअफमा प्रवेश गरिसकेको मुम्बई इन्डियन्सलाई पहिलो इनिङमा ७ विकेटको क्षतिमा १ सय ३८ रनमा सिमित राखेको छ। टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको मुम्बईविरुद्ध हैदराबादले उत्कृष्ट बलिङ गर्यो। दुई अफगानी बलर मो...
मेसीका 'डुप्लिकेट' इरानी प्रहरीद्वारा पक्राउ
तेहरान, बैशाख २५ (एजेन्सी) - केही महिनाअघि मेसी जस्तै देखिने रेजाका बुवाले बार्सिलोनाको १० नम्बर जर्सीमा उनको फोटो खिचाएका थिए। २५ वर्षीय रेजाले मेसी जस्तै देखिन कपाल काट्नुको साथै दाह्री पालेर कलर गरेका थिए। उनले एएफपीसँग कुरा गर्दै भने, ‘अहिले सबैले मलाई इरानी मेसीको रुपमा चिन्छन् र मेसीको मिमिक्री गर्न लगाउँछन्। कुनै ठाउँमा मलाई देखेर मानिसहरु स्तब्ध हुन्छन्।‘
रुस्लान अत्तरीया कपः एपिएफ र राईजिंग उपाधिका लागि भिड्ने
सेतोपाटी, धनगढी, वैशाख २५ - कैलालीको अत्तरीयामा जारी ‘रुस्लान अत्तरीया कप’मा विभागीय टोली एपिएफ र राईजिंग क्रिकेट वुमन उपाधिका लागि भिड्ने भएका छन्। सोमबार भएको सेमिफाईनलमा जित हात पार्दै दुबै टोली उपाधिका लागि आमनेसामने हुन लागेका हुन्।
च्याम्पियन्स ट्रफीका लागि भारतीय टोली घोषणा, गम्भीर, हरभजन र रैना बाहिर
मुम्बई, वैशाख २५ (एजेन्सी) - च्याम्पियन्स ट्रफीका लागि भारतीय टिमको छनोट भएको छ। निकै ढिलो घोषणा भएको भारतीय टिममा गौतम गम्भीर र हरभजन सिंह पुनः स्थान बनाउन असफल भएका छन्। शिखर धवन र रोहित शर्मालाई पुनः टिममा समावेश गरिएको छ। यी दुवैले यसपाली प्रतियोगिताको प्रारम्भ गर्ने बताइएको छ। यिनीहरूको ब्याक–अपको रुपमा अजिङ्का रहाणे रहने छन्।
लिभरपुललाई एनफिल्डमा धक्का, मिल्नेर पेनाल्टीबाट चुके
एनफिल्ड, बैशाख २४ (एजेन्सी) - लिभरपुललाई उसैको घरेलु मैदानमा साउथहाम्पटनले गोलरहित बराबरीमा रोकेको छ। यो नतिजासँगै प्रिमियर लिगमा शीर्ष ४ स्थान सुनिश्चित गर्ने लिभरपुलको अभियानमा गम्भीर धक्का लाग्ने सम्भावना बढेर गएको छ। Comments